Tongava Ao Shina Mandritra ny Krismasy Mba Hankafy Ny Fahalalaham-pivavahana! · Global Voices teny Malagasy
Tongava Ao Shina Mandritra ny Krismasy Mba Hankafy Ny Fahalalaham-pivavahana!	Voadika ny 29 Desambra 2012 3:55 GMT
Zarao: Sampana iray ao amin'ny Antoko Komonista Shinoa, ny Global Times, izay namoaka lahatsoratra momba ny Krismasy ka manasa ireo Shinoa mpanara-baovao mpila-ravinahitra mba hoavy hankalaza ny fety ao Shina [zh] mba hahita maso ny fomba fankalazan'ny mponina Shinoa ny Krismasy manerana ny firenena.
Ho setrin'ireo tsikera maro sosona momba ny filazana fa tsy manana fahalalahana ara-pivavahana i Shina no anton'izany lahatsoratra izany. Araka ny tatitry ny China Aid, olona 1289 farafahakeliny no nosamborin'ny manampahefana Shinoa tamin'ny taona 2011 izay voarohirohy tamin'ny resa-pivavahana.
Na dia eo aza ny lahatsoratra sahisahy navoakan'ny Global Times, nitatitra ireo mpiserasera fa nosakanana ny vavahady fidiran'ireo fiangonana sasantsany nandritra ny Krismasy tamin'ity taona ity. Fanampin'izany, sanganehana tamin'ny lahatsoratra ny miozolomana vitsy an'isa ao Shina, ny fikambanana Ouïghourr, ary nihantsy ny Global Times mba hanasa ireo mpanara-baovao ao amin'ny faritry Xinjiang hoavy mandritra ny fetiben'ny Miozolomana.
Tsy Fahalalaham-pivavahana ny fahafahana manjifa
Nanipika avy hatrany ny fahadisoana tamin'ny lahatsoratry ny Global Times ny ankamaroan'ireo mpiserasera izay nilaza fa mamintina ny fahalalahana ara-pivavahana ho fankalazana tsy ara-pivavahan'ny Noely ny lahatsoratra. Ireto ambany ireto ny sasany tamin'ireo fihetseham-po mikasika ny fizotry ny vaovao [zh] tao amin'ny habaka bilaogy fohy Sina Weibo ao Shina:
铭格格-洛桑卓玛：Amin'ny fijery ivelan'i Hu Shijun, mpamoaka lahatsoratra ao amin'ny Global Time, midika ho fahalalaham-pivavahana ny fetibe ara-barotra, mitovy amin'ny fahalalaham-pivavahana ny fitsidihana ara-pizahan-tany eny amin'ny fiangonana sy ny tempoly…
彭勇-AARON：Fahalalahana manjifa izany, aza afangaro amin'ny fahalalaham-pivavahana.
Tamin'ny fomba manesoeso, nahatsikaritra ny mpiserasera fa voaràra ireo fiangonana sasany ary nakaton'ny vadin-tany nandritra ny krismasy. Tamin'ny 24 Desambra 2012, tao an-tanànan'i Tianjin, Deci celestial nitatitra hoe [zh]:
Mientanentana ny fankalazana ny fetiben'ny noely ary nandeha tao amin'ny fiangonana Xikai akaikin'ny làlana Bingjiang aho. Nakatona avokoa ny varavarana rehetra any am-piangonana. Farany, nahita fidirana miafina aho amin'ny fanarahana toromarika hita amin'ny taratasy A4 mipetaka amin'ny andrin-jiro. Eny an-dalana, sakana 5 farafahakeliny no napetraky ny polisy.
Sary narakitr'ilay ny mpisera Weibo, Liagyage izay mampiseho fiangonana iray nakatona tao Xian nandritra ny andron'ny Krismasy.
Tamin'ny 25 Desambra, Kristianina marobe no nanao hetsi-panoherana tao an-tanànan'i Xian, faritanin'i Shaanxi, satria nakatona ny fiangonan'izy ireo. Nandrakitra sary namariparitra ny zava-misy i Liagyage:
[Ny sary dia mampiseho] Ny fidirana ao am-piangonana izay nakatona; sy ny lalana nobahanana. Raha nankalaza ny noely izao tontolo izao, nipetraka tamin'ny tany kosa ny vahoaka teto, mitomany ao anatin'ny alin'ny ririnina mangatsiaka? Nahoana no toy izany?
Darkmumu nandefa indray ny sarin'i Liyiforever ary nahasarika fanehoan-kevitra vitsivitsy mikasika ny zava-misy amin'ny fahalalaham-pivavahana ao Shina:
天行者68th：Tamin'ireo toerana nitangoronan'ny olona, izay tsy tratran'ny laingan'[ireo manam-pahefana], dia lasa faritany tsy azo idirana amin'izao fotoana.
染香姐姐：Adala tokoa izy ireo. Manery ny olona hino sy handeha any amin'ny fivavahana satanika ny fanakatonana fiangonana amin'ny andro atoandro be nanahary. Raha amin'ny alina no atao ny fankalazana, hiteraka fahotana sy heloka izany. Raha mamela ny fivavahana (fitorian-teny) malalaka sy an-kalamanjana i Shina, tsy hivadika sekta ny hetsika ara-pivavahana.
西葫芦馅儿：Haitraitra ny fananana finoana eto amin'ity firenena ity.
实习奋青：Tsara kokoa raha ny vola no hinoana ato amin'ity firenena ity.
“Fivavahana Satanika” avokoa ny Trano-Fiangonana
Ao Shina, ny hetsika ara-pivavahana Protestanta rehetra dia eo ambanin'ny fandrindran'ny Hetsika Tia Tanindrazana An'ireo Fiangonana Protestanta Telo Mahaleotena ao Shina, izay fehezin'ny Antoko Komonista Shinoa (CCP). Sokajiana ho tsy ara-dalàna sy azo faizina mora foana ny Fiangonana na hetsika Kristianina hafa, mivondrona ao amin'ny anarana hoe Trano fiangonana. Mitady miha-mino ny olona ivelan'ny tontolo Kristianina fa fivavahana satanika ny Fiangonana ivelan'ny Telo-Mahaleotena. Tsy vitsy ohatra ny fanehoan-kevitra tahaka ity manaraka ity izay avy amin'ny 詹姆-兰尼斯特 [zh]:
Tsy mino izany vaovao izany aho [fanakatonana fiangonana ao Xian]. Fananan'ny fiangonana ny Fiangonana rehetra ary ao Shina, ny Fiangonana Telo-Mahaleotena Tia Tanidrazana no tompony. Tsy hakaton'ny governemanta ny rantsany ? Angamba mety ho Trano-fiangonana tokoa ilay nakatona. Amin'izany, hoy aho hoe “tsy misy hiraharahiako anareo, fivavahana satanika lò!”
Hasao Amin'ny Fetibe Miozolomana ireo mpanara-baovao
Nahita ihany koa ny fikambanana Ouïghours ao Shina fa miteraka olana ny lahatsoratra navoakan'ny Global Times. Nanoratra fanehoan-kevitra mihantsy ny Global Times ny Ulghurbiz.net ary nanasa ireo mpanara-baovao hamonjy ny fetibe fankalazan'ny Miozolomana ao Xinjian :
Rakotra fahadisoan-kevitra ny lahatsoratry Global Times. Manodina ny fanjifan'ny tanora Shinoa ny “fety tandrefana” ho fahalalahan'ny kolontsaina kristiana ao Shina izany. Hovahan'ny governemanta ve ny fanaraha-maso raha tsy fety fanjifana na fitadiavam-bola ny Krismasy? Vokatry ny fahaverezan'ny soatoavina fototra ao amin'ity firenena ity amin'ny ankapobeny no nampiakatra ny isan'ireo Kristianina ao Shina. Te-hahazo fampaherezana avy amin'ny fivavahana ny olona. Misy idiran'ny politika misokatry ny governemanta ve izany? Mila adihevitra maharitra mikasika izany isika. Raha mitsikera ny famoretana ny fombam-pivavahana Miozolomana ao Shina ny fampahalalam-baovao tandrefana tamin'ny fankalazana ny Eid al-Fitr sy ny Eid al-Adha, ho sahy hamoaka lahatsoratra toy izao ve ny Global Times “Ianareo tsy matoky ny Fahalalaham-pivavahana ao Shina, tongava ao Xinjiang hamonjy ny Fetibe ao?
Tantaran'ny Azia Atsinanana farany 44 minitra izayShinaSivana Nihatra Taminà Sary Mahatsikaiky, Fikarohana Teny Sy Sary Momba Ny Matson'i Shina Ho An'ny Ady Lehibe Faharoa
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español, বাংলা, Italiano, Français, 繁體中文, 简体中文, English
FanoheranaFitantanam-pitondranaFivavahanaMediam-bahoakaToekarena sy Fandraharahàna